Sumcadda RW 'Rogane' | KEYDMEDIA ONLINE
Waxaase dhici karta dad wax ma garato ah ama fidno wadayaal ah ama daneystayaal ah ay siiyeen RW Roble talo qaldan ama waxaa dhici karta in RW Roble ku fashilmay inuu kala ilaaliyo, kala sooco Xilka Xukuumadda xilgaarsiinta ah iyo faragelinta iyo xadgudubyada Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo.
Isla marka waxaa subixii lagu weeraray KM4 xubno kale ee ka mid ahaa Midowga Musharrixiinta Xilka Madaxweynaha, dhacdaasoo dibedda iyo gudaha laga daawanayay. Dhacdadaas waxay beenisay warkii RW Roble ka jeediyay idaacadaha ee uu ku sheegay in dagaalkii saqda dhexe ka dhashay weerar ay soo qaadeen koox hubeysan ee maleeshiyad ah.
Waa dulmi, marinhabaahin, iyo mas’uuliyad darro in RW Roble ku andacoodo in bannaanbaxa ay soo qabanqaabiyeen ciidammo dowladeed ee hubeysan asagoo ogsoon cidda ku dhawaaqay bannaanbaxa iyo barnaamijka bannaanbaxa oo idaacadaha laga siidaayay.
Talada la gudboon RW Roble waxay tahay inuu saxo hadalka taarikhxumada ku ah asaga iyo inta wanaagga la jecel, kuna dadaalo inuu maro dhabbaha waafaqsan dastuurka kmg iyo garashada wanaagsan, cidna ka oggolaan in maalin cad karaamada laga qaado.